Mozika maroloko : mizara ny hafaliany i Franckisnah | NewsMada
Mozika maroloko : mizara ny hafaliany i Franckisnah
Slow, reggae, basesa, sns, hainy tokony ny miangaly izany ! Ankoatra ireo, folak’i Franckisnah tsara ihany koa ny fampifangaroana gadona samihafa ka mahatafavoaka mozika vaovao. « Hafaliana lalina tsy hay ambara no tsapako eo am-pizarana ny zavakanto ataoko ho an’ny mpiara-belona amin’ny alalan’ny filalaovana ny mozika mivelatra amin’ny gadona maroloko », hoy izy.
Tononkira mivantana, mifototra tanteraka amin’ny filazana ny zava-misy sy ny endri-piarahamonina andavanandro rahateo ny ampiasain’ity mpanakanto ity. Hita taratra io ao anatin’ny sanganasany toy ny « Tiako Rasta », nentiny nambabo ny mpankafy zavakanto. Tsy mihambahamba rahateo izy mampiasa ireo voambolana teraka eny anivon’ny fiarahamonina hanamorana ny fampitana hafatra.
Mba hampandrosoana ny kolontsaina, mpanakanto mahazaka tsikera sy mivelatra amin’ny fampandrosoana ny fanabeazam-boho ny mozika malagasy i Frackisnah. Eo am-panomanana ny famoahana ny kapila mangirana laharana voalohany “Tiako Rasta” izy ankehitriny. Tsy ho ela ihany koa ny hivoahan’ny rindran-tsary vaovao nampitondrainy ny lohateny “ ‘Ty misy kôzy ho anao Chérie!”.
Nangonin’i HaRy Razafindrakoto